एक सफल बृद्धि मार्केटि Machine मेसिन निर्माण गर्न T सल्लाहहरू Martech Zone
G सुझावहरू सफल ग्रोथ मार्केटिंग मेशीन निर्माण गर्न
शुक्रवार, अक्टुबर 21, 2016 बिहीबार, अक्टुबर 20, 2016 जोन कर्विन
कम्पनीहरूले अन्वेक्षित च्यानलहरूमा नयाँ राजस्व चलाउन खोजेको रूपमा, विकास पहलहरू झन् झन् लोकप्रिय हुँदै गइरहेका छन्। तर तपाई कहाँबाट सुरु गर्नुहुन्छ? कसरी के तपाई सुरु गर्नुहुन्छ? म स्वीकार गर्दछु, यो भारी हुन सक्छ।
सर्वप्रथम, किन बृद्धि पहलहरू अवस्थित छन् भन्ने कुरा गरौं। यदि कुनै कम्पनीले राजस्व बृद्धि गर्न कोशिस गर्दैछ भने, ती केहि तरीकाले गर्न सक्छन्: उत्पादनको सीमान्तको विस्तार, औसत अर्डर मूल्य सुधार गर्न, ग्राहकको जीवनकालिन मूल्य बढाउन, इत्यादि। व्यापक श्रोताको लागि। कुन कारणले हामीलाई केही कम्पनीहरूले रिडर्स डॉट कॉमले बढि ग्राहकहरू लिन विकास मार्केटि .मा लगानी गर्दै आएका छन्। जबकि विकास मानसिकता तपाइँको व्यवसायको धेरै क्षेत्रमा लागू गर्न सकिन्छ (चेतना बढाउनुहोस्, कायम राख्ने, आदि), यस लेखको उद्देश्यको लागि म केवल ग्राहक अधिग्रहण वृद्धिलाई स refer्केत गर्दैछु।
यस वर्षको सुरूमा गठन गरिएको हाम्रो ग्रोथ टीमले धेरै परीक्षण र त्रुटिबाट पार गरेको छ, केही ठूलो जीतहरू अनि निश्चित रूपमा धेरै विफलताहरूको अनुभव गरेको छ। चाहे तपाईंसँग पहिले नै केही विकास मार्केटिंग पहलहरू स्थानमा छन्, वा प्रक्रिया कसरी सुरु गर्ने भन्ने बारे एउटा संकेत छैन, जुन हाम्रो टीमले विगत वर्षमा प्रभावकारी बृद्धि मेसिन निर्माणको बारेमा सिकेको छ जुन अनपेक्षित ग्राहक अधिग्रहण च्यानलहरू मान्य गर्नका लागि छ। ।
सबैबाट विकास विचारहरू संकलन गर्नुहोस्.
बिभिन्न विभागहरूले अवसरहरू अवस्थित भएको सम्बन्धमा विशिष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दछन्। मेरो सल्लाह: मेरो उनीहरूको विशेषज्ञता। ईन्जिनियरि Team टीमको एक सदस्य र अपरेशन्स टीमको एक सदस्यले बिभिन्न भिन्न विचारहरू प्रस्ताव गर्नेछ। यसको फाइदा लिनुहोस्।
न केवल टोली सदस्यहरूका विविध प्रकारको संलग्नताले तपाईंलाई एक राम्रो सुरूवात विन्दु दिन्छ, यसले तपाईंलाई बृद्धि मानसिकता र प्रयोगलाई आफ्नो कम्पनीको डीएनएमा बुन्ने अवसर पनि दिन्छ। जबकि तपाईंको ग्रोथ टीमले 'ग्रोथ रोडम्याप', वा विकास पहलहरूको स्वामित्व राख्दछ जुन तपाईंले निर्धारित समयसीमा भित्र लागू गर्ने योजना बनाउनुहुन्छ, संगठनमा सबैले प्रक्रियामा स्वामित्वको भावना महसुस गर्नुपर्दछ।
सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंसँग अधिकार छ विश्लेषण र ठाउँमा डेटा पूर्वाधार.
अन्धा उडान नहुनुहोस्। कुनै पनि विकास पहल शुरू गर्दा, तपाईं सफलता कस्तो देखिन्छ र तपाईं यसलाई कसरी ट्र्याक जाँदै हुनुहुन्छ को एक स्पष्ट परिभाषा हुनुपर्दछ। सहि उपकरणहरू प्रभावी रूपमा मा आफ्नो लक्ष्य मापन गर्न महत्वपूर्ण छ। तपाईंले सफलताको लागि निर्धारण प्रक्रिया योजना योजनामा ​​पकाउनुपर्नेछ र नियमित तालिकामा रिपोर्ट गर्नुपर्नेछ। कडा प्रतिक्रिया लुप तपाईंको जीवन रगत हो। त्यसो भए पछि तपाईं परीक्षाको नतीजाहरूबाट सिक्न सक्नुहुनेछ र भविष्यमा ठूला र अझ राम्रो पहलहरू निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ। जति सक्दो सफल पहल संग, विश्लेषण तपाईंको टोलीलाई असफल अन्तर्दृष्टि र असफल प्रयोगहरूका नयाँ सीखाहरू पनि सक्षम पार्दछ।
अधिकतम मूल्य प्रदान गर्न ध्यान केन्द्रित गर्न सजगतापूर्वक विकास विचारहरूलाई प्राथमिकता दिनुहोस्.
त्यहाँ हजारौं ग्राहक अधिग्रहण च्यानलहरू तपाईंको लागि उपलब्ध छन्, प्रत्येक दिन नयाँ अवसरहरू काट्ने कुरा उल्लेख नगर्न। ग्रोथ मार्केटरको रूपमा तपाईले कसरी पत्ता लगाउनु पर्छ तपाईं यी अवसरहरू मार्फत तपाईंको कम्पनीलाई अधिक मूल्य प्रदान गर्न सक्दछ। छोटकरीमा, विचारहरूलाई प्राथमिकता र प्राथमिकता दिन सिक्नु आवश्यक छ।
चमकदार वस्तु सिन्ड्रोम विकास बजारहरूले लगातार नयाँ अवसरहरू छोड्दा सामान्य समस्या हुन सक्छ। यसको लागि झर्नु हुँदैन। यसको सट्टामा, ध्वनि कम गर्न र एक पुनरावृत्ति योग्य र स्केलेबल पद्धति परिचय गर्न एक फ्रेमवर्क अ emb्गाल्नुहोस्। त्यहाँ विकास कार्य प्रक्रियाको बारेमा धेरै प्रस्तावित विधिहरू छन्, त्यसैले यो सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको टीमले तपाईंको र तपाईंको वातावरणको लागि राम्रो काम गर्ने फेला पार्न समय लिन्छ।
इनाम संग शेष जोखिम.
जबकि हामी अन्तत: 'ब्याटमा' हामी लिन्छौं (अधिक मात्रा, भोल्यूम, भोल्यूम!) स max्ख्या अधिकतम पार्ने प्राथमिकतामा, हामी यो पनि बुझ्दछौं कि सबै अवसरहरू बराबर सिर्जना गरिएका छैनन्। एउटा ठूलो शर्त, त्यो कर्षण प्राप्त गर्न सजिलै दस सानो जीत ट्रम्प गर्न सक्छन्।
हामीले हाम्रो साना, कम जोखिमपूर्ण शर्तको साथ केहि ठूला-स्विing जोखिमहरूमा मिसिन सफलता पाएका छौं। 'ब्यालेन्स' परिभाषित गर्नु तपाईंको टीमको लागि अद्वितीय हुनेछ, तर तपाईले प्रत्येक कार्यनीतिमा हुने जोखिमको आकारलाई नक्कल गर्न टाढा नजानुहोस्। केही कार्यनीतिहरूले आफैंलाई क्रल, हिंड्न, रन अप्रोचमा राम्रो तरिकाले उधारो दिन्छन्, जबकि अरूलाई सबैमा सबै दृष्टिकोणमा आवश्यक पर्न सक्छ।
धेरै छिटो चालूको पक्षमा त्रुटि.
समय एक विशाल सफलता कारक हो, यो अक्सर तपाईंको टीमको दुर्लभ संसाधनको बावजुद। द्रुत गतिमा अघि बढ्न नडराउनुहोस्। उदाहरण को लागी, केहि विकास प्रयोगहरु सँगaछ पहिलो चालक फाइदा, अर्थ अवसरहरूले ती रणनीतिहरू प्रतिबद्ध गर्न चाँडै यो स्थापित च्यानलको अघि सहयोग गर्न सक्दछन्। यस्तो अवस्थामा चाँडो कमिटि गर्नु महत्त्वपूर्ण छ, किनकि यो ठूलो आरओआई वा डिफलस्लेटर रिटर्न बीचको भिन्नता हुन सक्छ।
तपाइँको ब्रान्ड र मिशनमा सत्य रहनुहोस्।
यो टिप अलि क्लिचि जस्तो लाग्न सक्छ, तर यो यद्यपि थम्बको राम्रो नियम हो। ग्रोथ च्यानलहरूको परीक्षण गर्दा, आफैलाई सोध्नुहोस्, "यदि यस कार्यनीतिले राम्रो प्रतिफल दियो भने के हामी त्यसलाई आफ्नो दीर्घकालीन रणनीतिमा लागू गर्नेछौं? ' यदि उत्तर होईन भने, अगाडि बढ्नुहोस्। धेरै विकास रणनीतिहरू सजिलै तपाइँले छिटो जीतलाई नेट गर्न सक्दछ तर यो बुझ्नु महत्वपूर्ण छ कि UX वा ब्रान्ड धारणा त्याग गर्न, आफैमा, एक लुकाइएको लागत हो। केही चीजहरू कागजमा उत्कृष्ट देखिन्छन् तर यदि तिनीहरू तपाइँको ब्रान्डको रूपमा को हुनुहुन्छ भने, तिनीहरू समय, लगानी वा प्रयासको लागि लायक हुँदैनन्।
नतिजा र सिक्नेसँग पारदर्शी हुनुहोस्।
जस्तोसुकै पक्का परीक्षण परिणामहरू कसरी हुन सक्छन्, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं आफ्नो टीमसँग डाटा डेमोक्रेटिti गर्नुहुन्छ ताकि उनीहरू तपाईंसँग सिक्न सक्छन्। एउटै गल्ती गर्ने बहु व्यक्तिहरूको त्यहाँ कुनै मतलब छैन किनभने टोली सदस्यहरू उनीहरूको शिक्षालाई सामजिक बनाउन हिचकिचाउँछन्। यसले लामो दौडमा सबैलाई फाइदा पुर्‍याउँछ।
चाहे तपाईं कति पढ्नुहुन्छ र विकास पहलहरूको अनुसन्धान गर्नुहुन्छ, सिक्ने सब भन्दा द्रुत तरीका भनेको आफ्ना विचारहरूको परीक्षण सुरू गर्नु हो। शंका वा असफलताको डरले आफूलाई पक्षाघात नबनाउनुहोस्। तपाईं असफल हुनुहुनेछ। स्वीकार गर। यसबाट सिक्नुहोस्। र फेरि यो सबै गर्नुहोस्। यो बढ्नको लागि एक मात्र तरीका हो।
टैग: वृद्धिविकास रणनीतिहरूबजार वृद्धिपाठकहरूचमकदार वस्तुसुझाव
जोन कर्विन यसमा ग्रोथ मार्केटिंगका निर्देशक हुन् Readers.com। ग्रोथ नेताको रूपमा उसको जिम्मेवारीमा नयाँ च्यानल अनुसन्धान र प्रयोग, ग्राहक अधिग्रहण विकास, र रणनीतिक साझेदारी शामिल छन्। ग्रोथ टोलीको मुख्य फोकस छिटो पहिचान, मान्यीकरण, पुन: पुनरावृत्ति, र त्यसपछि नयाँ च्यानलहरू पाठ्यकर्ताहरूको.com को राजस्व बृद्धिलाई मद्दत गर्नका लागि स्केल गर्न हो। तिनी परीक्षणको मार्केटिंग काल्पनिकहरू निर्माणको बारेमा जुनसुकै कुराबाट शुरु देखि मापन मा परिणाम मा ड्राइभ छ।